May 2017 - Page4of 113 - BuzzFeed Myanmar
ရွှေခေတ် မြန်မာ့လက်ရွေးစင် ဘောလုံးသမားဟောင်း ဦးမျိုးဝင်းညွန့် ကွယ်လွန်
၂၀၁၃ ဆီးဂိမ်းစ်မီးရှူးတိုင်သယ်ယူရေး အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ခဲ့သည့် ဦးမျိုးဝင်းညွန့် (ဓာတ်ပုံ – ညီညီစိုးညွန့်)
ရွှေခေတ်မြန်မာ့လက်ရွေးစင် ဘောလုံးသမားဟောင်း ဦးမျိုးဝင်းညွန့် (၇၂ နှစ်) သည် ယနေ့ နံနက် ၁ နာရီ မိနစ် ၅၀ တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ရီးယဲလ်မက်ဒရစ် တိုက်စစ်မှူးဟောင်း မိုရီရန်းတေးစ် မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်မည်
စပိန်လက်ရွေးစင်နှင့် ရီးယဲလ်မက်ဒရစ် တိုက်စစ်မှူးဟောင်း ဖာနန်ဒိုမော်ရီရန်းတေးစ်သည်
မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်လည်ပတ်၍ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းနှင့် ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းတို့
ရန်ကုန်မြို့၊ မြန်မာပလာဇာရှိ Eclipse Bar ရဲ့ Restaurant တွင် ကြည့်ရှုမည်ဖြစ်သည်။
ရေနွေးကို တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီး ဆူအောင်တည်သောက်လျှင် ကျန်းမာရေးထိခိုက်စေတယ်။
ရေကို ဆူအောင်ကျိုချက်ပြီး သောက်တာက ပိုးမွှားရောဂါကင်းစင်စေတယ်လို့ လူတိုင်းသိထားကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီးဆူအောင် တည်တာကတော့ ကောင်းခြင်းရဲ့ ဆန့်ကျင့်ဘက်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
မြောက်ရီးယား ငရဲပြည် က ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့ ကင်ဂျုံအန် ရဲ့ ရန်သူတော် အမျိုးသမီး
မြောက်ကိုရီးယား အာဏာရှင် နိုင်ငံမှာ အရွယ်ရောက်သည်အထိ ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ ပါ့ခ်ယွန်းမီ အမည်ရတဲ့ မိန်းမပျိုလေးဟာ အခုဆို တောင်ကိုးရီးယားမှာ ဘေးရန်ကင်းရှင်းစွာနဲ့ သူမ ၀ါသနာပါတဲ့ စာပေရေးသားမှုတွေ အနှောက်အယှက်ကင်းကင်း ပြုလုပ်နိုင်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ချိုင်းမှာစွဲကပ်နေတဲ့ အညိုအမည်းတွေကို ၁၀မိနစ်တည်းနဲ့ သိသိသာသာ ချွတ်ပစ်နိုင်တဲ့နည်း
ချိုင်းမည်းတဲ့ကိစ္စဟာ အမျိုးသမီးအများစုအတွက် ပြဿနာတစ်ခုပါပဲ ။ ချိုင်းဖြူအောင် roll on တွေလိမ်း ၊ ကျောက်ချဉ်တွေလိမ်းသော်လည်း မသက်သာတာမျိုးတွေ ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီနည်းလမ်းလေးကို စမ်းကြည့်လိုက်ပါ ။ ၁၀မိနစ်တည်းနဲ့တင် သိသိသာသာ ဖြူသွားစေပါတယ်။
ခြေထောက်တွေက သတိပေးနေသော အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ လက္ခဏာရပ်များ
ကျွန်မတို့ရဲ့ ခြေထောက်တစ်စုံဟာ ကျွန်မတို့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးရဲ့ အလေးချိန် ကို သယ်ပိုးထားရတဲ့ အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ခြေထောက်တစ်စုံမှာ ခန္ဓာကိုယ်က အရိုးစုစုပေါင်းရဲ့ ၂၅%ပါဝင်နေပြီး အဆစ်ပေါင်း ၃၃ခု၊ အရွတ်ပေါင်း ၁ဝဝ၊ မရေမတွက်နိုင်တဲ့ သွေးကြောမျှင်လေးတွေနဲ့ ကြွက်သားတွေပါဝင်ပါတယ်။
သင်တို့ရော ပျားကိုက်ခံဖူးပါသလား။ ပျားကိုက်ခံရရင် နာရီအနည်းငယ်လောက်အထိ အရမ်းနာကျင်ပြီး အရမ်းကို ခံရခက်ခဲပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပျားအဆိပ်ကို ပြယ်စေပြီး နာကျင်မှုကို သက်သာစေတဲ့သဘာဝနည်းလမ်းလေတွေကို ဝေမျှချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ထောင်ကျနေတဲ့အချိန်က အဖေနဲ့အမေအတွက် ငရဲပါပဲဆိုတဲ့ ပြေတီဦး
မတွေ့တာကြာပြီဖြစ်တဲ့ ကိုပြေကြီးခေါ် အကယ်ဒမီပြေတီဦးကို ဒါရိုက်တာညိုမင်းလွင် ဇနီးစန္ဒာလွင်ရဲ့ UK Pre School ကျောင်းဆင်းပွဲမှာ တွေ့ဆုံခိုက် . . . မြင်ရတဲ့သူတိုင်းကို အေးမြတဲ့ အပြုံးလေးတွေနဲ့ အေးချမ်းစေတဲ့ ကြီးကြီး ဒေါ်တီတီ (ပြေတီဦးမေမေ)အကြောင်း စကားလက် ဆုံကျမိတဲ့အခါ . . . ကိုပြေကြီးမေမေကဖြေဖူးတယ်။
ဆံပင်ပါးတာနဲ့ ဆံပင်ကျွတ်တဲ့ ပြဿနာတွေကို တစ်ပတ်အတွင်း ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ ကြက်ဥနဲ့ ပေါင်းတင်နည်း ၃ သွယ်
ဆံပင်ပါးနေလို့ ဆံပင်တွေခဏခဏကျွတ်နေလို့ စိတ်ညစ်နေလား။ ဒါဆိုရင်တော့ သဘာဝနည်းလမ်းလေး ၃ သွယ်ကိုမျှဝေပေးမယ်နော်။
ကြက်ဥက ဆံပင်အတွက်ဘာတွေကောင်းတယ်ဆိုတာ အရင်ပြောပြပေးမယ်နော်။